Maxaad kala socota shirka EPRDF ee Maanta Furmaya?Maqaal – Warsan iyo Weedh Saxsan!
Waxaa Furmi doonaa Shirka Eprdf kasoo 4ti xisbi ee Ugu awooda Badan ku ballansanyihiin waxaanala lafilayaa inee hareeso dood aad U kulul…..
Doodan ayaa Waxaa la filyaa Inee Ka dhalato khilaaf xoogan….
hada sidee Wax Yihiin.
Tigreega waxa Ay muujiyeen inee umadax Banaan yihiin arimahooda waxayna xisbiga Usoo doorteen xubno lid ku ah Dowlada hada jirta ee Abiya ahmed…..
Waxaa kmaid ah Ninka caanka ahaa ee Getajow asafe oo ahaa sirdoonkii Dowladii tigrega majarahana u hayeye Xukunka wadanka 27 sano.
Mar Uu hadlayey ninka u hadla qomiyahada Ormada jawar mahamed waxa uu sheegay inee cawaaqib xumo Ka imaan doonto keeni Kartana in gabi ahaanba Xisibiga laga saaro tigreega xisibigiisa oo ah TpLf.(tegree)
*Hadaba waa Maxay ujeedka tigreega
Maadama lagu eedeeyo dhibkii Dhacay qoomiyada Tigreega raga u dhashay Ujeedka ugu wayn ee laga leeyahay soo celinta Ragii hore Ay tahay raga ugu sareeyo danbiga lagu tuhmayo lagu soo celiyo siyaasada si markaas dadka intiisa kale unabad galaan
getajow asefa waa sidrdoonkii 18 asano wadanka maamulayey danbiyadii dhacayna asaga Dusha loo saaray mar hadii uu Maanta katirsanyhay xisbigii waynaa ee Wadanka eprdf si xor ahna ku joogo halkaas waxaa lagu iloobayaa qolyihii kale waa sida ay Isleeyihiine.
Hadaba In gatajew shirka Ka Qaybgalaa iyo inkale Lafteeda dood ayaa ka Taagan warar ayaa sheegaya in loo diyaariyey Ciidan qabta isaga Rag hore oo tigrega katirsana waxa sheegeen hadee arinfaas dhacdo inee ka dhalan doonto cawaqib xumo wayn maadama ninkaan uu matalo xibiga tplf (tegree)
3 Xisbiyada kale waxaa ka dhacay isbadal kuwaasoo hada Umuuqda kuwa lajaanqaadi kara isbadalka iyo siyaasada abiya ahmed
*HADABA Isbadalka Waa mid noocee ah.
WAXAA dhici doono Isbadalo xaga xisbiga ah Waxaana labadali doonaa qaybo kamid ah astaamaha iyo Iyo xeer Hoosaadka Xisbiga si Deeganada qaar Loogu qanciyo…..
Waxaana dhici doonta inta Shirka socdo doorasho Hogaaminta sare ah Oo kow katahay gudoomiyaha Xisibiga oo hada uu hayo abiya ahmed
*Hadaba waa Sidee Rajada abiya ahmed
Haa waa Uu Geelsan Karaa bal Xogtan akhri
Tirada Guud Xisbiga waa 180 waana kuwa wax kasta go aamin doona waana 4 xisbi (4 deegan)
Deegaankiiba waxuu leeyahay 45 xubnood Taasoo tirada Guud ka dhigaysa 180 xubnood.
Abiya Wuu wada haystaa 45 Xubnood ee Deegaanka romada sida la qiyaasayo
DHABUUBTA waxa uu kaheli karaa 41 cod Madaama uu inta badan isbadal ka dhacay lkn 45 mawada heli karo mucaarad ayaa jira……
37 Ayuu ka heli karaa Isbadal wuu dhacay Lkn shaki ayaa jiro maadama amxaarada ay wax tabanayaan lama aamino karo lkn qiyaastii waa 37
TIGREE 8 Cod iyaga mucaard xoogan ayey umuuqdaan way is wada aaminsanyihiin lacago xoog lehna way haystaan.
Tirada guud ayaa noqon doonta Sida la is leeyahay waxuu heli Doonaa 131 Cod sidaas ayuuna ku guuleesan doonaa maadama Doorashada Xisbiga tahay gacan taag.
Abiya waxaa lafilayaa in la waydiiyo su aalo loona soo jeediyo dhaliilo Xooogan shirka karhacaya bari awasa.
KALASOCO waxii kasoo kordha feerfeee.com
W/Q Abdihakin abdulahi maxamed (gamaadiid)
Previous Cabdirashiid Ibraahin Dhaqane oo loo Magacaabay guddoomiyaha Degmada Feer-feer.
Next Xubnaha Maamulka Degmada Feer-feer oo lagu dhawaaqay.